Myanmar (Birmania) · Oktobra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Myanmar (Birmania) · Oktobra, 2010
Tantara mikasika ny Myanmar (Birmania) tamin'ny Oktobra, 2010
Ny sainam-pirenena vaovao sy ny anarana vaovaon'i Myanmar
Politika31 Oktobra 2010
Naseho am-pahibemaso voalohany tamin'ny herinandro lasa teo ny sainam-pirenena vaovaon'i Myanmar. Manana anarana vaovao koa izy: fantatra ankehitriny amin'ny anarana hoe Repoblikan'ny Fiombonan'i Myanmar. Mitsikera ny sarin'ilay saina ireo mpampiasa aterineto any Myanmar. Ny mpitoraka blaogy sasany aza manitrikitrika fa ny tafika ihany no asehon'io saina io fa tsy ny...
Myanmar/Birmania: Fanentanana “Ataovy ankivy ny Fifidianana”
Fifidianana30 Oktobra 2010
Haroso amin'ny 7 Novambra ihany ny fifidianana any Myanmar na tsy handray anjara aza ireo antoko mpanohitra. Adikan'ny Global Voices ny fanambaràna avy amin'ireo vahoaka ao Myanmar izay hanao ankivy ny fifidianana ho avy.
Filipina02 Oktobra 2010
Betsaka ireo bilaogy mikasika ny baolina kitra any Azia Atsimo atsinanana izay manome vaovao lehibe farany sy ara-potoana mikasika ireo lalao baolina kitra sy ny fandaharam-potoana any amin'ny faritra. Ireto misy lisitr'ireo bilaogy mikasika ny baolina kitra any Azia Atsimo Atsinanana izay mifantoka kokoa amin'i Vietnam sy i Kambodja .